तालिबानले आज नयाँ सरकार घोषणा गर्दै, मन्त्रिमण्डलमा महिला राख्छ त ? - anamolpost.com
१९ भाद्र २०७८, शनिबार ०९:५७
(तस्बिरमा बाँयातर्फ तालिबानी सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर र तालिबान नेताहरु)
काठमाडौं । अफगानिस्तानमा आज नयां सरकार घोषणा हुँदैछ । तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले संचारमाध्यमहरुलाई बताएअनुसार आज तालिबान नेतृत्वको नयां अफगानी सरकार घोषणा हुनेछ । हिजै घोषणा हुने भनिए पनि अन्तमा आएर स्थगन गरिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेअनुसार सरकारको नेतृत्व तालिबानका सहसंस्थापक एवं दोहास्थित राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादरले गर्नेछन्।
तालिबानको सूचना एवम् संस्कृति आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारी मुफ्ती इनामुल्ला समांगानीले भनेका छन्, नयां सरकारको बिषया विचार विमर्शले लगभग अन्तिम रूप दिइसकेको र क्याबिनेटबारे पनि आवश्यक चर्चा भइसकेको छ ।
तालिबानका सुत्रका अनुसार मुल्ला बरादरसँगै तालिबानका संस्थापक मुल्ला उमरका छोरा मुल्ला मोहम्मद याकुब र शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनजकईले पनि सरकारमा महत्त्पूर्ण भूमिका पाउने बताइएको छ ।
समाचारहरुमा बताइएअनुसार नयाँ तालिबानी सरकारमा १२ जना मुस्लिम विद्वान सल्लाहकार र २५ मन्त्री रहनेछन्।
तालीबान सरकारमा महिला सहभागिता ?
तालीबान फेरी सत्तामा फर्केपछि अफगानी महिलाहरु सबैभन्दा बढी त्रसित छन् । महिलाप्रती धार्मिक कट्टरता देखाउने तालिबानको नयां सरकारको महिलाप्रतीको नीति र ब्यवहार कस्तो रहने भन्ने प्रतिक्षाको बिषय छ ।
तालिबानले आज घोषणा गर्ने नयां सरकारमा महिला सहभागिता हुन्छ ही हुँदैन् भन्ने बिषयमा महिला अधिकारकर्मी लगायत धेरैको गम्भिर चासो छ । तालिबान सत्तामा आएपछि महिलाका बिषयमा उठिरहेका गम्भिर प्रश्नबारे आफुहरु जानकार रहको र आफ्नो सरकारमा महिला सहभागिता गराउने तालिबानले अनौपचारीक रुपमा भन्दै आएको छ ।
तालीबानीहरूले यसअघि सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानमा शासन चलाउँदा महिलामाथि कडा कानुन लादेको थियो। महिलाहरूलाई १२ वर्षपछि पढ्न नदिने उनीहरूको नियम थियो। त्यस्तै बजार निस्कँदा पनि पुरुष सहयोगी अनिवार्य गरिएको थियो ।
अफगानमा अमेरिकी सैनिक त्यहाँका महिला तथा बालिकाहरु ढुक्कसँग विद्यालय र विश्वविद्यालय गइरहेका थिए । तर तालिबान फेरी सत्तामा फर्केपछ उनिहरुले धेरैले देश छोडेका छन् भने अधिकांस महिला आतंकति छन् ।